Miaraka amin'ny metaly miaraka amin'ny teknolojia fanaovan-jiro
Misy fomba maro azo ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny metaly, ao anatin'izany ny welding, ny brazing ary ny soldering. Inona no maha samy hafa ny welding sy ny brazing? Inona no maha samy hafa ny brazing sy ny soldering? Andao hizaha ireo fanavahana misy tombony azo ampitahaina ary koa fampiharana mahazatra. Ity fifanakalozan-kevitra ity dia hampitombo ny fahatakaranao ny fidirana vy ary hanampy anao hamantatra ny fomba tsara indrindra ho an'ny fampiharana.
NY FOMBA FOMBA AZY
A mitambatra brazed dia vita amin'ny fomba hafa tanteraka avy amin'ny vy miharo. Ny fahasamihafana lehibe voalohany dia ny mari-pana - ny brazing dia tsy mampiempo ny metaly ifotony. Midika izany fa ny maripana mamirifiry dia ambany kokoa noho ny teboka miempo ny metaly ifotony. Ny mari-pana mampihena dia ambany kokoa noho ny mari-pana amin'ny metaly fototra, tsy dia mampiasa angovo.
Raha tsy mampiaraka ny metaly ifotony ny brazing, ahoana no ampiarahany azy ireo? Izy io dia miasa amin'ny famoronana fatorana metallurgical eo anelanelan'ny metaly famenony sy ny sehatry ny metaly roa manatevin-daharana. Ny fitsipika izay anintomana ny metaly fameno amin'ny alàlan'ny firaisana mba hamoronana ity fatorana ity dia ny hetsika capillary. Amin'ny asan'ny brazing dia apetakao amin'ny metaly ifotony ny hafanana. Ny metaly famenoana dia ampifandraisina amin'ireo faritra mafana. Miempo eo noho eo ny hafanana ao anaty metaly ifotony ary voasarika amin'ny alàlan'ny hetsika capillary tanteraka amin'ny alàlan'ny tonon-taolana. Toy izao no anaovana ny voahangy brazed.
Ny fampiharana Brazing dia misy ny elektronika / herinaratra, aerospace, automotive, HVAC / R, fananganana sy maro hafa. Ny ohatra dia manomboka amin'ny rafi-panafihana rivotra ho an'ny fiara ka hatrany amin'ny elatra turbine jet mora tohina ka hatramin'ny singa satelita ka hatrany amin'ny firavaka tsara. Brazing dia manolotra tombony lehibe amin'ny fampiharana izay mitaky fidirana amin'ny metaly fototra tsy mitovy, anisan'izany ny varahina sy vy ary koa ny tsy metaly toy ny karbida tungsten, alumina, grafite ary diamondra.
Tombony azo ampitahaina. Voalohany, ny volo mitambatra dia firaisana mafy. Ny mpiray biriky vita vita tsara (toy ny mpiraikitra) dia matetika no matanjaka na matanjaka noho ny metaly atambatra. Faharoa, ny marindrano dia vita amin'ny maripana somary ambany, manomboka amin'ny 1150 ° F ka hatramin'ny 1600 ° F (620 ° C ka hatramin'ny 870 ° C).
Ny tena zava-dehibe dia tsy miempo mihitsy ireo metaly ifotony. Satria tsy miempo ny metaly fototra, dia matetika no mitazona ny ankamaroan'ny fananana ara-batana. Io fahamendrehana metaly ifotony io dia mampiavaka ny tonon-taolana rehetra, anisan'izany ny tonon-taolana manify sy matevina. Ary koa, ny hafanana ambany dia mampihena ny loza ateraky ny fanodikodinam-by na ny fiadiana. Diniho ihany koa fa ny mari-pana ambany dia mitaky hafanana kely - singa iray mitahiry vola be.
Tombony lehibe iray hafa amin'ny famonoana brazing dia ny fanamorana ny fidirana amin'ny metaly tsy mitovy amin'ny alloys flux na cated / coated. Raha tsy mila miempo ny metaly fototra ianao hanatevin-daharana azy ireo, tsy maninona na manana teboka hafainganam-pandehanana samihafa aza izy ireo. Azonao atao ny manamboatra vy amin'ny varahina mora foana toy ny vy amin'ny vy. Ny welding dia tantara hafa satria tsy maintsy atsonika ireo metaly ifotony hampifangaroana azy ireo. Midika izany fa raha manandrana manamboatra varahina ianao (teboka miempo 1981 ° F / 1083 ° C) amin'ny vy (teboka miempo 2500 ° F / 1370 ° C) dia tsy maintsy mampiasa teknika fanamafisam-po be pitsiny sy lafo vidy ianao. Ny fahamoran'ny fidirana amin'ny metaly tsy mitovy amin'ny alàlan'ny fomba fanao mahazatra dia midika fa azonao atao ny mifidy izay metaly sahaza indrindra amin'ny asan'ny fiangonana, satria fantatrao fa tsy hanana olana amin'ny fidirana amin'izy ireo ianao na firy na firy ny hafan'izy ireo miempo.
Ankoatra izany, a mitambatra brazed manana endrika ivelany milamina sy manintona. Misy ny fampitahana amin'ny alina sy ny alina eo anelanelan'ny fonosana kely sy milamina amin'ny fiarahan'ny brazed sy ny vakana matevina sy tsy ara-dalàna ao anaty vitrana iray. Ity toetra ity dia manan-danja indrindra ho an'ny tonon-taolana amin'ny vokatra mpanjifa, izay manakiana ny fisehoana. Ny fiarahan'ny brazed dia azo ampiasaina matetika "toa", tsy mila asa vita - fitehirizana vola hafa.
Ny Brazing dia manolotra tombony lehibe iray hafa amin'ny welding izay ahafahan'ny mpandraharaha mahazo fahaizana brazing haingana kokoa noho ny fahaiza-manao welding. Ny antony dia mitoetra ao amin'ny tsy fitovizan'ny fizotrany roa. Ny valan-tsolika mifangaro vy dia tsy maintsy jerena miaraka amin'ny fampifanarahana marina ny fampiharana hafanana sy ny fametrahana ny metaly fameno. Ny fiarahan'ny brazed kosa dia mazàna "manao ny tenany" amin'ny alàlan'ny hetsika capillary. Raha ny marina, ny ampahany betsaka amin'ny fahaiza-manao tafiditra amin'ny famonoana brazing dia miorim-paka amin'ny famolavolana sy ny injeniera ao aminy. Ny hafainganam-pandeha ampitahaina amin'ny fiofanana momba ny mpandraharaha mahay dia singa iray manandanja.
Farany, vy vy dia mora mandeha ho azy. Ny toetra mampiavaka ny fizotran'ny brazing - ny fampiharana ny hafanana midadasika ary ny fanamorana ny fametrahana ny metaly famenony dia manampy amin'ny fanafoanana ny mety hisian'ny olana. Misy fomba maro hanafanana ny mandeha ho azy, maro karazana metaly famenon'ny brazing ary fomba maro hametrahana azy ireo mba hahafahan'ny fiasan'ny brazing mora foana ho an'ny ambaratonga famokarana rehetra.
NY FOMBA FOMBA FOMBA FOMBA
Ny welding dia manatevin-daharana ny metaly amin'ny alàlan'ny fandrendrehana sy ny fampiraisana azy ireo, matetika miaraka amin'ny fanitarana vy famenoana. Ny tonon-taolana vokarina dia matanjaka - matetika mahery toy ny metaly niraikitra, na matanjaka kokoa aza. Mba hampifangaroana ireo metaly dia mampiditra hafanana mifantoka mivantana amin'ilay faritra iombonanao ianao. Ity hafanana ity dia tsy maintsy atao amin'ny hafanana avo hanalefaka ny metaly ifotony (ny metaly ampiarahina) sy ny metaly fameno. Noho izany, ny mari-pana amin'ny welding dia manomboka amin'ny lelam-by amin'ny metaly.
Ny welding dia matetika mifanaraka amin'ny fidirana amin'ireo fivoriambe lehibe izay matevina (0.5 "/12.7mm) ny metaly roa ary mihombo amin'ny teboka tokana. Koa satria tsy ara-dalàna ny vakana ny valan'ny vy, dia matetika tsy ampiasaina amin'ny vokatra mitaky fitambaran-tarehy. Ny fangatahana dia ahitana fivarotana, fanamboarana, famokarana ary fanamboarana fivarotana. Ohatra amin'izany ny fivorian'ny robotic miampy ny fanamboarana sambo faneriterena, tetezana, rafitra fananganana, fiaramanidina, mpanazatra sy lalamby ary lalan-kely hafa.
Tombony azo ampitahaina. Satria mahery vaika ny welding, dia matetika no voafaritra sy voafaritra tsara izy io; tsy azo ampiharina ny mampihatra azy amin'ny fomba mitovy amin'ny faritra midadasika. Io lafiny voafaritra io dia manana tombony. Ohatra, raha te-hiditra amina vy kely roa amin'ny fotoana tokana ianao, dia azo ampiharina ny fomba fangejana fanoherana herinaratra. Ity dia fomba haingana sy ara-toekarena hanamboarana tonon-taolana mahery sy aman'hetsiny aman'hetsiny.
Raha toa ka mitanjozotra ny mpiray fa tsy voafaritra tsara, dia misy ny olana. Ny hafanana eo an-toerana amin'ny welding dia mety hanjary fatiantoka. Ohatra, raha te-hikira vy roa ianao dia manomboka amin'ny fametahana ny sisin'ny faritry vy mba hanomezana toerana ho an'ny metaly fameno las. Avy eo dia mihodina ianao, manafana aloha ny faran'ny faritra iombonany amin'ny hafanana miempo, avy eo ahetsiketsika miadana ny hafanana amin'ny tsipika mitambatra, mametraka metaly famenony amin'ny fampifanarahana ny hafanana. Ity dia mahazatra ary mahazatra. Namboarina araka ny tokony ho izy, io fomban-tsolika io dia matanjaka farafahakeliny matanjaka noho ny metaly nanatevina.
Na izany aza, misy ny fatiantoka amin'ity fomba fampiraisana ity. Ny tonon-taolana dia vita amin'ny hafanana avo - avo ampy handrendrika ireo metaly ifotony sy metaly mpanenjana. Ireo mari-pana ambony ireo dia mety hiteraka olana, ao anatin'izany ny fanodikodinam-bola sy ny famonoana ny metaly ifotony na ny fihenjanana manodidina ny faritry ny las. Ireo loza ireo dia kely dia kely rehefa matevina ny metaly atambatra, saingy mety hanjary olana izy ireo rehefa tapitra manify ny metaly ifotony. Ary koa, ny mari-pana avo dia lafo, satria ny angovo dia angovo ary ny angovo kosa mandany vola. Arakaraka ny hafanana ilainao hanaovana ny mitambatra, no vao mainka hamoahana ny fiarahana.
Diniho izao ny fizotran'ny welding. Inona no mitranga rehefa tsy miditra amin'ny fiangonana iray ianao, fa fivoriambe an-jatony na an'arivony? Ny Welding, amin'ny natiora, dia manome olana amin'ny mandeha ho azy. Ny mpiray-tohotra-welding vita amin'ny teboka tokana dia mora mandeha ho azy. Saingy, raha vao lasa tsipika ny teboka - mpiray tsipika - indray mandeha indray dia tsy maintsy tadiavo ilay tsipika. Azo atao tsara ny manao automatique an'io asa io, mamindra ny tsipika mitambatra, ohatra, mandalo fiantsonana fanafanana sy famahanana tariby famenoana mandeha ho azy avy amin'ny fantsom-be. Ity dia fametrahana sarotra sy mahitsy, na izany aza, tsy maintsy atao raha tsy rehefa manana famokarana be dia be ianao.
Ataovy ao an-tsaina fa mihatsara hatrany ny teknikan'ny welding. Azonao atao ny mandroso amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny andry elektronika, ny famoahana ny capacitor, ny fifandirana ary ny fomba hafa. Ireo fizotrany be pitsiny ireo dia matetika mitaky fitaovana manokana sy lafo vidy miampy fametahana sarotra, mandany fotoana. Diniho raha azo ampiharina amin'ny fampandehanana fohy kokoa ny famokarana, ny fanovana ny fananganana fivondronana na ny fitakiana metaly isan'andro.
Misafidy ny fizotran'ny metaly mety
Raha mila tonon-taolana izay maharitra sy matanjaka ianao, dia mety hampihena ny metaly anao amin'ny fikajiana mifanohitra brazing. Ny famolahana sy ny famonoana dia samy mampiasa metaly hafanana sy mpameno. Izy roa dia azo tanterahina amin'ny famokarana. Na izany aza, mifarana eo ny fitoviana. Tsy mitovy ny fomba fiasan'izy ireo, koa tadidio ireto fiheverana miady amin'ny famonoana ireto:
Ny hatevin'ny fizarana metaly ifotony
Fepetra iraisana na tsipika iraisana
Fivoriambe farany ilaina
Safidy hafa? Ny tonon-taolana mifatotra mihombo (misy kofehy, mihitsoka na rivets) amin'ny ankapobeny dia tsy ampitahaina amin'ny tonon-taolana matevina amin'ny tanjaka, fanoherana ny hatairana sy ny hovitrovitra, na ny famoahana ny famoahana. Ny famehezana sy ny fametahana adhesive dia manome fatorana maharitra, fa amin'ny ankapobeny, tsy afaka manome ny tanjaky ny fiarahan'ny brazed - mitovy amin'ny na lehibe kokoa noho ny an'ny metaly fototra. Izy ireo koa dia tsy afaka mamokatra tonon-taolana izay manohitra ny hafanana mihoatra ny 200 ° F (93 ° C). Rehefa mila tonon-taolana vy sy vy maharitra ianao, dia mpifaninana matanjaka ny brazing.
Sokajy Technologies Tags brazing, mitambatra mitambatra, asa manao ahoana, ahoana ny fiasan'ny welding, metaly brazing fampidirana, metaly mitambatra fampidirana, mitambatra brazing, welding welding, vy vy, heater brazing vy, vy fampidirana vy, vy vy, heater vy vy, welding Post Fikarohana